Daawo muuqaalka: Madaxweynaha oo booqday xerayo lagu tababaro ciidamada dowlada Soomaaliya |
Daawo muuqaalka: Madaxweynaha oo booqday xerayo lagu tababaro ciidamada dowlada Soomaaliya
Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynaha Jamhurriyadda federalka Soomaaliya,oo ay wehliyaan xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo madaxda ciidamada ayaa maanta booqday xerooyin ay ku jiraan ciidamo loo tababarayo dowladda Soomaaliya si ay uga qeyb qaataan howlaha amaanka dalka lagu sugayo.
Madaxweynaha iyo mas’uuliyiintii la socday ayaa booqday dugsiga tababarka ciidamada booliska ee Jeneraal Kaahiye iyo xerada Jaziira oo ciidamo milateriga dowladda ka tirsan lagu tababarayo.
Booqashada oo ay aheyd mid uu madaxweynaha ugu kuur galayay xaaladda ay ciidankaasi ku sugayihiin ayuu madaxweynaha ciidamada u rajeeyay inay ka faa’idaystaan tababarkooda, isla markaana ay ka soo baxaan howsha loo igmaday.
Madaxweynaha waxaa booqashada ku wehliyay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Jeneraal Daahir Aadan Cilmi (Indhaqarshe).
Madaxweynaha ayaa booqashadiisu ku soo beegantay iyada oo lafilayo in dhawaan laxuso maamilnta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo ku beegan 12-ka April, waxaana xuskii sanadkii hore loo dhigi lahaa loo baajiyay cabsi xagga amaanka ah inkasta oo dib laga xusay.